သောကြာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 29, 2010 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Scott Hardigree
အပိုင်းတစ်ပိုင်း (သင့်အနေဖြင့်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူလိုအပ်ပါက…) အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပိုင်ဆိုင်သောကျွမ်းကျင်သူများနှင့်စာချုပ်ချုပ်ရန်အဘယ်ကြောင့်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ကောင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ငှားရမ်းခြင်းမပြုမီထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်လမ်းညွှန်စည်းမျဉ်းများကိုဖော်ပြပါမည် အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ, အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတိုင်ပင်ခံသို့မဟုတ်အိမ်တွင်းအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာ။ အဘယ်ကြောင့်?
များသောအားဖြင့်ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ရွေးချယ်မှုကိုမှားယွင်းသောသတ်မှတ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ နှလုံးကြေကွဲမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျခြင်းနှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်ဒေါ်လာများစွာဆုံးရှုံးမှုတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သင်၏ရှာဖွေမှုကိုပထဝီဝင်အနေအထားအရမထားပါနှင့်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သီးခြားကမ်းရိုးတန်းများသို့မဟုတ်တိုက်ကြီးများပေါ်တွင်လည်းတည်ဆောက်ရန်မဖြစ်နိုင်ဟုမဆိုလိုပါ။ သင်ရှာဖွေနေသောအရာသည်မှန်ကန်သောအံကိုက်ဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ သင်၏ရှာဖွေမှုကိုအစကတည်းကသတ်မှတ်ထားသောပထဝီareaရိယာသို့ကန့်သတ်ခြင်းသည်မလိုအပ်ပါ။ သင့်ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်နှင့် ROI အန္တရာယ်နှင့်အတူ, လောင်းကြေးနည်းတူမြင့်မားသည်။ ယနေ့အီးမေးလ်နှင့် WebEx ဆက်သွယ်မှုသည်လွယ်ကူမြန်ဆန်သည်။ အမှန်တကယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များနှင့် (ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊ အပြည့်အဝစီမံခန့်ခွဲသော ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည်ဖြစ်စေ) ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွေ့ဆုံကြသောအခါအစည်းအဝေးများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အာရုံစိုက်ပြီးထိရောက်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးအချိန်အကန့်အသတ်ရှိသည်။
အရွယ်အစားပေါ်အခြေခံပြီးပညာရှင်များထုတ်မပြပါနဲ့။ အကယ်၍ သင်သည်ကုမ္ပဏီငယ်တစ်ခုဖြစ်ပါက၎င်းတို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုများပိုမိုပေးပြီးသင်လိုအပ်သည်ထက်အတွေ့အကြုံပိုများသောကြောင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းငှားရမ်းခြင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းကိုလုံးဝမလုပ်သင့်ပါ။ သေချာတာပေါ့၊ သင်ကသူတို့အတွက်အမြတ်အစွန်းကြီးမားတဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။
အလားတူစွာ၊ ဖောက်သည်ကြီးများအနေဖြင့်အေဂျင်စီငယ်များသို့မဟုတ်လွတ်လပ်သောပညာရှင်များကိုသူတို့၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမှမဖယ်ထုတ်သင့်ပါ။ စျေးဆိုင်ငယ်များ၏ ဦး ဆောင်မှု၌ပါရမီရှိသောသူများသည်ဒေသတွင်းရှိအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူသို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းအပြည့်အ ၀ ၀ န်ထမ်းများထက်အတွေ့အကြုံပိုရှိနိုင်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုကြီးမားသောအေဂျင်စီကြီးတစ်ခုတွင်သင့်အားတာဝန်ပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အရေးကြီးသောအာရုံ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေးအခေါ်များဖြစ်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်။ ကဏ္experienceအလိုက်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စု၏အတွေးအမြင်နှင့်လည်းသက်ဆိုင်နိုင်သည်။ မည်သူမျှအဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး တစ်ယောက်အနေဖြင့်သင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိသမျှကိုမည်သည့်အခါကမျှသိရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သိသောအရာများဖြစ်သောအီးမေးလ်စျေးကွက်၏အနုပညာနှင့်သိပ္ပံပညာကိုငှားရမ်းသင့်သည်။
အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၌ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာစက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင်လုပ်ကိုင်ခြင်းမှရရှိသောအကြံဥာဏ်များကို ၀ တ်မှုန်ကူးခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းတိုင်းသည်ထူးခြားသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးသည်တူညီသောလက္ခဏာများကိုမျှဝေသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုမှ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားအစေခံခြင်းသည်သင်ယူခြင်းသည်မကြာခဏဆိုသလိုအခြားတစ်ခုရှိဖောက်သည်တစ် ဦး အတွက်အကြံဥာဏ်သစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
မှန်းဆစရာအလုပ်တစ်ခုကိုမတောင်းဆိုပါနှင့်။ မှန်းဆလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုများသည်အေဂျင်စီလုပ်ငန်း၏တားမြစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအီးမေးလ်ဗဟိုပြုသူများအတွက်လည်းအလားတူဖြစ်သည်။ အထူးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများသည်စတီးရွိုက်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြပြီး၊ စွမ်းရည်။ သို့သော် spec အလုပ်မလုပ်ရန်အကြီးမားဆုံးအကြောင်းပြချက်မှာသင်အမှန်တကယ်လိုချင်သောအကောင်းဆုံးအလားအလာများ - မလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့မလိုအပ်ဘူး။ သူတို့သည်သင့်အတွက်ထင်ကြေးများသောကွင်းဆက်များကိုဖြတ်ကျော်ရန် ပို၍ ဆန္ဒရှိလေ၊ သံသယဝင်သင့်လေဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုစွန့်လွှတ်ဖို့အဆင်သင့်ရှိရင်အဲဒါဟာဈေးကွက်ကောင်းမဖြစ်သင့်ဘူး။
သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်နှင့်ပတ်သက်။ မေးခွန်းများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ငွေ (သို့မဟုတ်ဘတ်ဂျက်ငွေ) ကစကားမပြောနိုင်ဘူးလို့ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောပါနဲ့။ အေဂျင်စီတစ်ခု (သို့) ပြင်ပလူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်သုံးစွဲသူ၏ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းနိမ့်ကျမှုအချို့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဘတ်ဂျက်သည်မည်သည့်အရာဖြစ်သင့်သည်ဟူသောအချက်ကိုသိရန်အရေးကြီးသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက်အရေးကြီးသည်။ သင့်ဘတ်ဂျက်ကိုစောစီးစွာကြေညာခြင်းသို့မဟုတ်ထင်ပေါ်လွန်းလွန်းသည်ဟုထင်မြင်ခြင်း (သင်တီထွင်ခဲ့သောပထမဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသတိရပါ) သင်၌မနှစ်မြို့ဖွယ်အတွေ့အကြုံရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ သို့သော်ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရသင်သည်စိတ် ၀ င်စားသောအလားအလာများနှင့်ပြောဆိုသောအခါသင်၏ဘတ်ဂျက်နှင့်ပတ်သက်လျှင်ပွင့်လင်းသောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုပြုလုပ်ပါ။ နောက်ဆုံး၌၎င်းသည်သင့်အားအချိန်၊ ခွန်အားနှင့်ငွေကိုသက်သာစေသည်။
သင်လိုအပ်တာကိုဆုံးဖြတ်ပါ။ သင်လုပ်နိုင်သမျှအဆိုးဆုံးကတော့အလုပ်တစ်ခုကိုငှားရမ်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ မင်းကို ဦး ဆောင်ဖို့တစ်ယောက်ယောက်လိုအပ်ပါသလား။ မဟာဗျူဟာသို့မဟုတ်ကွပ်မျက်မှာကျွမ်းကျင်သူဖွံ့ဖြိုးနိုင်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက? ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်လိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်လား။ အမိန့်ကိုယူရန် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သို့မဟုတ်သင်၏အတွေးကိုစိန်ခေါ်မည့်သူတစ် ဦး ဦး ။
စကားစပြောပါ။ အလားအလာများကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ၊ သို့မဟုတ်သူတို့ကိုခေါ်ဆိုပါ။ ဖုန်းနှင့်အတူမိနစ်အနည်းငယ်အချိန်ယူပြီးဓာတုဗေဒနှင့်စိတ် ၀ င်စားမှုကိုသင်ချက်ချင်းရလိမ့်မည်။ ၄ င်းတို့၏သမိုင်းကြောင်း၊ သူတို့၏လက်ရှိဖောက်သည်များ၊ သူတို့၏အဓိကစွမ်းရည်များအကြောင်းသူတို့ကိုမေးမြန်းပါ။
လက်တဆုပ်စာဖြင့်သာလေ့လာမှုပြုရန်သူတို့ကိုဖိတ်ပါ။ သင်အစီရင်ခံရန်ကောင်းမွန်သောရလဒ်များရှိမရှိသိရန်မမျှော်လင့်ကြောင်း (၎င်းတို့အားလုံးက) မဟုတ်ဘဲသူတို့၏ဖြေရှင်းနည်းများမည်သို့ရောက်ရှိပုံကိုနားလည်ရန်စိတ်စွဲမှတ်ထားပါ။ သင်သည်သူတို့၏လုပ်ငန်းစဉ်၊ မည်သည့်အရာ၊ မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်သင်၏ကုမ္ပဏီနှင့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်မည်သို့ကိုက်ညီမည်ကိုလေ့လာပါလိမ့်မည်။ ယုတ္တိရှိသလား။ Inspiration-based? ဒေတာကမောင်းနှင်တာလား။
သင်အဆင်ပြေသည့်အခါသင်နှင့်ရှည်လျားပြီးအောင်မြင်သောဆက်ဆံရေးကိုသေချာစေရန်သူတို့နှင့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုဆွေးနွေးပါ။ သင့်လျော်သောလျော်ကြေးငွေနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်သင်၏မျှော်လင့်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သဘောတူညီမှုကိုရှင်းလင်းရန်လာပါ။ ပြီးရင် starter သေနတ်ကိုပစ်ပြီးအလုပ်လုပ်ပါ။
Scott Hardigree မှာအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သည် အခုတောင်Orlando, FL တွင်အခြေစိုက်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီနှင့်အကြံဥာဏ်များ။
Scott ကို scott@indiemark.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
Search Engine Optimization Haters များ